Plume Piano ihany no misafidy fitaovana mety ho an'ny piano mety. Raha ny momba ny YY-DQN01-tsika, ny sosona farany amin'ny loko ivelany an'ny piano dia voaravaka polyester melamine, voaravaka loko tsy voakarakara vita amin'ny polyester, toy ny fitaratra, ny hatsarana sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fitaovana volafotsy, ny lokony ary ny fanavaozana hatrany.
Ny fampiasana ny klavie martsa 88 ambaratonga avo lenta 88 isa avo lenta dia ny 88 Keyboard no fomba hamokarana timbre mihetsika. Mitombo mitombo miandalana ny lakilem-bokatra 88, izay mifanentana tsara amin'ny fiovan'ny tanjaky ny rantsan-tànana, mihatsara ny famolavolana, ary ny valin'ny tantanana dia tena marina toy ny piano piano acoustique marina.
Ny tena zava-dehibe dia nampidirinay tao amin'ny pianô anay ny tabilao feo loharano momba ny DREAM frantsay. Fantatsika rehetra fa ny fampisehoana filalaovana maimaim-poana dia ny mason'ny herin'ny teknolojia. Ny santionany avy amin'ny piano grand grand dia afaka mamoaka ny feo mamela ny olona hiroboka ao anatin'ny tontolon'ny mozika. Amin'ny fahitana ny timbre, manatsara ny fahaizan'ny milalao, manonitra ny lesoka amin'ny filalaovana ary manatsara ny fahaizan'ny mpamorona piano mihitsy aza.
Ny fitambaran'ny mpandahateny mahatalanjona sy ny fampisehoana an-tsary avo lenta avo lenta, Plume YY-DQN01 dia afaka mamonjy anao amin'ny olana amin'ny fandraisana mpampianatra piano. Ny hany mila ataonao dia ny manaraka ny fitarihan'ny piano ary mankafy.
Fitaovana ambonin'ny PVC avo lenta
Ohatra Fampisehoana an-tsarimihetsika nandroso tamin'ny martsa 88 ambaratonga avo indrindra
Loharanom-peo Loharanon-kira DREAM frantsay
Stereo Amplifier Fifanarahana ambaratonga avo 30W
gazety Hom-trano avo lenta avo roa heny
interface tsara MIDI, Headphones Stereo, Audio, famatsian-kery DC 15V
Herin'ny famoahana 15W * 2
miseho Fampisehoana LED avo lenta
Function hafa Dual Timbre, Metronome, Mode fandalinana, firaketana / Playback, Transposition, fanaraha-maso mahery vaika amin'ny keyboard
Teo aloha: Plume Upright Piano YY-DJ02
Piano taloha mahitsy
Piano mandeha amin'ny herinaratra
Pust an'ny mpilalao marina
Piano mandeha amin'ny herinaratra, Piano nomerika lafo vidy, Kitendry Piano Smart, Piano Digital Upright, Electric Grand Piano, Fanamboarana Piano Digital,